Omenala nri nke Spain | Akụkọ Njem
Omenala nri nke Spain buru ibu, di iche iche ma dikwa nma nke ukwuu. Ihe mejupụtara ya bụ onyinye sitere na mpaghara dị iche iche nke mba ahụ yana akụrụngwa mara mma toro eto na mpaghara. Site na tapas ndị a na-ewu ewu n’oge a ruo n’ọkụ ọdịnala na-atọ ụtọ na nri ofe, nri ndị Spain na-anwa ịme ihe kachasị mma na mpaghara.
Ọ bụ ezie na gastronomy Italian ma ọ bụ French abụwo ebe etiti nlebara anya ruo ọtụtụ afọ, Spanish ka dị na ndabere, na-echere oge ọhaneze ga-achọpụta ya. The Michelin kpakpando na Spanish chefs akwụ na-adịbeghị anya na-egosi na a mgbanwe na-emekarị na ndị ọzọ ndị mmadụ nwere mmasị na-achọpụta ihe nzuzo nke omenala Spanish nri. Ọ bụrụ n’ị bụ otu n’ime ha, anyị na-akpọ gị òkù isonyere anyị na njem a na-emegharị n’akụkụ ọ bụla nke mba a ebe a iri nri..
1 Efrata nke nri ọdịnala si Spain
2 Top 10 efere nke nri ọdịnala nke Spain
2.2 Spanish Spanish achịcha
2.5 Asturian agwa agwa
2.6 Pigkpọ anụ na-ackụ ara
2.8 Octopus na feira
2.9 Odu ehi
Efrata nke nri ọdịnala si Spain
Ebe ọ bụ na Spain nwere mpaghara mpaghara dị iche iche nwere ihu igwe dị iche iche, nri mpaghara na ihe ha nwere dị iche iche. Agbanyeghị, ndị na-esonụ bụ ndị ndị Spen na-ahụkarị ma nwee mmasị na ha:
Hamen Iberia: ọ bụ ngwaahịa a ghọtara nke ọma na dị oke ọnụ ahịa n'ime na n'èzí ala anyị. Enwetara site na anụ ahụ gwọrọ nke pigs Iberian. Pata negra na-ezo aka na 100% acorn-nri ham, nke a na-ewere dị ka nke kachasị mma.
Mmanụ oliv ọzọ: ọ bụ ihe dị mkpa maka nri ọdịnala nke Spain. Igwe mmiri a enweghị ike ịfu na kichin ọ bụla nke Spain.
Saffron: Saffron na-agwakọta nke ọma na ginger, lemon, garlic, thyme na tomato.
Paprika: Oge a nke nwere ekpomeekpo siri ike bụ otu n’ime ihe eji esi nri Spanish ma na-ejikarị ya akwadebe sausaji, sobrasadas na chorizo. Ojiji ya bu igodo iji nwee otopopus Galician di uto, na patatas bravas ma obu iji dozie akwa ochie nke nwere osi nri. Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ịgbakwunye ntakịrị nri iji nye ha ụcha agba, ekpomeekpo na ose.
Mmanya: ihe ọzọ dị mkpa nke kichin anyị. Vineyar na-etolite na Obodo kwurula iri na asaa nke e kewara mba ahụ. Esemokwu dị iche iche nke ihu igwe na ala dị iche iche na-eme ka Spain bụrụ ebe nwere oghere maka imepụta mmanya dị iche iche. Offọdụ mpaghara mmanya a ma ama n’ụwa niile bụ Rioja, Ribera del Duero, Marco de Jerez, Rías Baixas, Penedés na Priorat.
Na chiiz: na Spain a na-eme ọtụtụ ehi, atụrụ ma ọ bụ ewu cheese, site na nke ọhụrụ ka ọ gwọọ, echebe site na Nchebe Echebe nke Mmalite. Na mkpokọta enwere chiiz iri abụọ na isii na DO bụ ụfọdụ n'ime ọmarịcha cheese nke Cabrales, cheese Idiazábal, cheese Mahón-Menorca, cheese Manchego, cheese Murcia, cheese Tetilla ma ọ bụ cheese nke Torta del Casar, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Azụ: a na-ejide azụ mmiri kacha mma na Europe n'ụsọ oke osimiri nke dị na mpaghara Iberian Peninsula. Prawn, crayfish, lobsters, barnacles ... ma ọ bụ nke a gụrụ n'ọkụ, na stew na ọbụlagodi na Spain, a na-eri ya ọkachasị n'ememe dịka ekeresimesi ma ọ bụ nke Afọ Ọhụrụ, kamakwa n'oge ọtụtụ afọ.
Citrus: Nranjas, mandarins, lemons ... Spain bụ onye ndu ụwa na mbupụ mkpụrụ citrus yana ihe dị mkpa na nri ọdịnala nke Spain. Ezigbo dị ka eji megharịa ọnụ, a na-ejikwa ha eme ihe ọicesụ juụ, na mmanya na nri, ma na salads na ntụziaka na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Anụ ndị ahụ: Anụ ehi, atụrụ, na anụ ezi bụ ụdị atọ a na-ahụkarị n'ụdị nri ọdịnala Spanish ma nwee ike ghee ya, sie ya na mmiri, ma ọ bụ ghee ya n'ọkụ. Ọkụkọ bụkwa ihe ama ama ma sie ya eghe, sie ya eghe.
Mkpụrụ: Agwa na chickpeas abụrụla nri nke peninsular kemgbe ọtụtụ narị afọ na abụọ n'ime nri ndị ama ama bụ stew Madrid na akwa Asturian.
Ogwu na uda: a na-eji galik, yabasị na ahịhịa dịka oregano, rosemary na thyme.
Top 10 efere nke nri ọdịnala nke Spain
Gazpacho nke Andalusia bu nri ndi mmadu n’abia n’obodo anyi n’oge ezumike. Ofe a oyi bụ akụ nke gastronomy anyị, maka ogo tomato na ose na mmanụ oliv.
Spanish Spanish achịcha
Ọ bụ otu n'ime efere kachasị amasị anyị nke esiri esi n'ọtụtụ mba: ọtụtụ ma ọ bụ obere curd, yana ma ọ bụ na-enweghị yabasị ... Agbanyeghị na mmalite ya amabeghị taa, a tụlere na esi mpụta ya na Extremadura na narị afọ nke iri na asatọ ka ọ dị mma ma rụkwaa nri nke zuru ụwa ọnụ ma jiri onye ọ bụla na-anwale ya kpọrọ ihe.
Valencia paella bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ onye nnọchi anya nri nri ọdịnala nke Spain n'ụwa niile. A na-esi ya n'ọtụtụ ụlọ na ngwụsị izu na n'oge ezumike. Ọ bụ nri osikapa emere anụ, saffron, mkpo na akwụkwọ nri nke a na-esi ofe ruo mgbe ọ kpọrọ nkụ.
Ọ bụ stew ejiri chickpeas na akwụkwọ nri na anụ dị iche iche nke Madrid a na-erikarị n'oge oyi. Classiczọ a na-ahụkarị maka ijere ya ozi bụ ọrụ atọ a maara dị ka mkpofu: ọrụ izizi bụ ofe, nke abụọ chickpeas na akwụkwọ nri na poteto na nke atọ nwere anụ. Ọ bụ nri siri ike nke na-akpọ gị oku ka ị rịa ụra mgbe e mesịrị.
Asturian agwa agwa
Ọ bụ nri ụwa niile nke Asturian na otu n'ime ihe kachasị mkpa na Spanish gastronomy. Agwa bụ isi ihe na-esonyere ya na ama a ma ama (chorizo, soseji ọbara na anụ ezi). Ọ bụ nri siri ike ma na-eje ozi na efere onye ọ bụla ma ọ bụ na casseroles. Ezigbo ihe ọ cidụ cidụ mmanya ma ọ bụ mmanya dị mma bụ ihe enyemaka zuru oke na nri ọdịnala a.
Pigkpọ anụ na-ackụ ara
Ọ bụ otu n'ime asados ​​ọdịnala na ama ama na Castilla, ọkachasị na Segovia na Ávila. Ejiri ya agwakọta anụ ahụ na-alingụ ara na anụ ya na-atọ ụtọ, nke bụ ihe ụtọ nke nri ọ bụla. Na Spain ọ na-ahụkarị iji ya n'oge ekeresimesi.
Enwere ike iri nri a nke nri ọdịnala nke Spain dị ka aperitif, dị ka isi nri ma ọ bụ dị ka nri n'akụkụ. Ọ bụ akụkụ nke mgwakota agwa e ghere eghe na-adabere na bechamel na iberibe ham, ọkụkọ ma ọ bụ azụ azu na akwa na achịcha bred. Ndị na-esi nri n’oge a na-emekwa ha site na cheese, prawn, jerky, spinach na mịrị, wdg.
Octopus na feira
Ọ bụ otu n'ime ụdị nrikarị nke Galician gastronomy. A na-enye ya na-ekpo ọkụ na poteto, nnu siri ike, paprika fesa nke nwere ike ịdị ụtọ ma ọ bụ oseose ma were obere mmanụ na-acha efere efere. Ngwakọta kachasị mma bụ otu iko mmanya dị mma.
Ọ bụ stew nke ehi ma ọ bụ ehi nke ụdị Cordovan nke bụbu otu n'ime nri ndị kachasị ewu ewu n'oge Rome oge ochie. Anụ a na-atọ ụtọ so yabasị, mmanya na-acha ọbara ọbara, tomato eghe ma ọ bụ ngwa nri dị ka ose oji, paprika dị ụtọ na klọọkụ.
Ntụziaka a bụ otu n'ime ọla Basque gastronomy. Azụ a na-esonyere ya na emulsion nke galik, mmanụ na chilli nke na-enye uto na ụtọ cod al pil pil.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Omenala nri si Spain